शीर्षकमा बाइबल पदहरू: ड्रग्स -> थप
मद्यको नशामा बाँचेर जीवन नष्‍ट नगर तर पवित्र आत्‍माले भरिपूर होओ।
 के तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्‍माको मन्‍दिर हो भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्‍वरले दिनुभएको पवित्र आत्‍मा नै तिमीहरूको शरीरभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। त्‍यसो हुँदा तिमीहरू आफैं पनि आफ्‍ना होइनौ। तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले मोल तिरेर किन्‍नुभएको हो। यसकारण तिमीहरूले आफ्‍नो शरीरले परमेश्‍वरको आदर गर।
१ पत्रुस ५:८
होश राख अनि चनाखो बन। तिमीहरूको शत्रु शैतान गर्जने सिंहजस्‍तै कसैलाई फेला पारूँ र खाऊँ भनेर दाउमा घुमिरहेको छ।
१ कोरिन्थी ५:११
तर मैलेचाहिँ ख्रीष्‍टिय भाइ हुँ भन्‍दै व्‍यभिचार गर्ने, लोभ गर्ने, मूर्ति पुज्‍ने, निन्‍दा गर्ने, मात्‍ने र चोर्नेहरूका बारेमा भनेको हुँ। यस्‍ता मानिसहरूसँग त सँगै बसेर पनि नखानू।
१ तिमोथी ५:२३
धेरै मद्य पिउनेले होहल्‍ला गर्छ र मूर्खता देखाउँछ। मताहा हुनु मूर्खता हो।
उनीहरूको हत्‍या गर्ने, टुनामुना गर्ने, व्‍यभिचार गर्ने, चोरी गर्ने कामहरूबाट मन फर्काएनन्।
१ पत्रुस ४:७
सबै कुराहरूको अन्‍त हुनै लागेको छ। तिमीहरूले आफैंलाई वशमा राखेर होशियार हुनुपर्छ। यसरी तिमीहरू प्रार्थना गर्न सक्‍छौ।
आफ्‍ना सोचबारे होशियार बस्, तेरो सोचअनुसार तेरो जीवन बन्‍दछ।
१ पत्रुस १:१३
यसकारण काम गर्न तिमीहरूको मन तयार होस्। होशियार होओ अनि प्रभु येशू आउनुहुँदा पाइने आशिष्‌मा नै पूरा भरोसा राख।
बत्तीको उज्‍यालो अबदेखि तँमा चम्‍कनेछैन र दुलहा-दुलहीका सोर तँमा सुनिनेछैन। पृथ्‍वी भरिका व्‍यापारीहरूमा तेरा व्‍यापारीहरू सबैभन्दा धनी थिए र तेरा सबै झूटा जादूगरीले तैँले संसारका सबै मानिसहरूलाई छक्याइस्!”
त्‍यहाँ पुगेर तिनीहरूले येशूलाई तीतो औषधी हालेको सिर्का खान दिए। चाखेपछि उहाँले पिउन मान्‍नुभएन।
१ कोरिन्थी ६:९-१९
 अन्‍याय गर्नेले स्‍वर्गको राज्‍यमा पस्‍ने हक पाउँदैन भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? आफैंलाई धोखा नदेओ। छाडा काम गर्ने, मूर्ति पुज्‍ने, व्‍यभिचार गर्ने, पुरुषगामी, चोर्ने, लोभ गर्ने, मात्‍ने, निन्‍दा गर्ने र लुट्‍नेहरूले स्‍वर्गको राज्‍यमा पस्‍ने हक पाउँदैन। तिमीहरू कति जना एक समय यस्‍तै थियौ। तर तिमीहरू पापबाट चोखियौ। परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई पवित्र पार्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्‍ट र हाम्रा परमेश्‍वरका आत्‍माद्वारा तिमीहरू परमेश्‍वरको अघि अब ठीक भएका छौ। कसैले भन्‍ला, “मैले जे गरे पनि हुन्‍छ।” तर सबै कुराले तिमीहरूको भलाइ गर्दैन। म पनि भन्‍न सक्‍थें, “मैले जे गर्दा पनि हुन्‍छ।” तर म कुनै कुराको कमारो बन्‍न चाहन्‍नँ। “खानेकुरो पेटको लागि हो, पेट खानेकुराको लागि हो,” कसैले भन्‍ला। ठीकै हो, तर परमेश्‍वरले यी दुवैलाई खारिज गर्नुहुनेछ। मानिसको शरीर व्‍यभिचारको लागि होइन, प्रभुको लागि हो अनि शरीरको लागि चाहिने कुरा प्रभुले नै बन्‍दोबस्‍त गर्नुहुन्‍छ। परमेश्‍वरले प्रभुलाई मरेकाबाट बिउँताउनुभयो अनि उहाँकै शक्तिले हामीलाई पनि बिउँताउनुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर ख्रीष्‍टका अङ्गहरू हुन् भनी के तिमीहरूलाई थाहा छैन। त्‍यसो भए के म ख्रीष्‍टको अङ्गलाई लगेर वेश्‍याको अङ्ग बनाऊँ? यो हुनै नसक्‍ने कुरो हो। वेश्‍याकहाँ जाने वेश्‍यासँग एउटै शरीर हुन्‍छ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धर्मशास्‍त्रले सफासँग भन्‍छ,’ “दुई जना मिलेर एउटै शरीर हुनेछ,” तर ख्रीष्‍टसँग मिल्‍नेचाहिँ उहाँसँग आत्‍मामा एउटै हुनेछ। व्‍यभिचारलाई त्‍याग। अरू पाप मानिसले आफ्‍नो शरीरदेखि बाहिर गर्दछ, तर व्‍यभिचार गर्नेले आफ्‍नै शरीरको विरुद्ध पाप गर्दछ। के तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्‍माको मन्‍दिर हो भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्‍वरले दिनुभएको पवित्र आत्‍मा नै तिमीहरूको शरीरभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। त्‍यसो हुँदा तिमीहरू आफैं पनि आफ्‍ना होइनौ।
१ थिस्सलोनिकी ५:६-८
 त्‍यसकारण अरूले झैँ हामीले सुत्‍नुहुँदैन, तर चेत राखेर जागा रहिरहनुपर्दछ। सुत्‍ने मानिस रातमै सुत्‍छन् अनि जँड्याहा पनि रातमै मात्तिन्‍छन्। तर हामीहरू त दिनका सन्‍तान भएका हुनाले हामी होशमा रहिरहौं। हामीले विश्‍वास र प्रेमको कवच लगाऔं अनि टोपझैँ मुक्तिको आशालाई पहिरिऔं।
१ कोरिन्थी 10:13
 [29-30] जँड्याहा र नयाँ मद्य नचाखिनहुने मानिस दु:खी, उदास, सधैँ झगडालु र दोष दिने बानी भएको हुन्‍छ। त्‍यसका आँखा राता-राता र शरीरमा टार्न सकिने स-साना चोट लागेका हुन्‍छन्। *** कडा रातो मद्यले तिमीलाई नलोभ्‍याओस्। त्‍यस्‍तो मद्य कचौरामा टिलिक्‍क चम्‍कने र घाँटीबाट सुलुक्‍क पेटमा उत्रने खालको हुन्‍छ तर त्‍यसको लोभ नगर। भोलिपल्‍ट बिहान तिमीलाई विषालु साँपले डसेझैँ लाग्‍नेछ। आँखाका अघि अचम्‍म-अचम्‍मका दृश्‍यहरू देख्‍नेछौ र तिम्रो सोच र बोली लरबराउनेछ। समुद्रमा छालले तलमाथि हुँदै हुत्‍याइएको बेला बेसञ्‍चो भएको यात्रीझैँ तिमीलाई आफू समुद्र यात्रामा गएजस्‍तो लाग्‍नेछ। तिमी यसो भन्‍नेछौ, “मलाई कसैले हिर्काएछ, कसले हिर्कायो, मलाई थाहा छैन। म किन उठ्‍न सक्‍दिनँ? फेरि मैले मद्य नपिई हुँदैन।”
१ थिस्सलोनिकी ५:६
त्‍यसकारण अरूले झैँ हामीले सुत्‍नुहुँदैन, तर चेत राखेर जागा रहिरहनुपर्दछ।
१ कोरिन्थी ६:१०
चोर्ने, लोभ गर्ने, मात्‍ने, निन्‍दा गर्ने र लुट्‍नेहरूले स्‍वर्गको राज्‍यमा पस्‍ने हक पाउँदैन।
तिमीहरूको विनाश अवश्‍य नै हुनेछ! तिमीहरू मद्य पिउन बिहानै उठ्दछौ र बेलुका धेरै बेरसम्‍म बसेर नमातुञ्‍जेल पिइरहन्‍छौ।
 मण्डलीको अगुवाले परमेश्‍वरको कामको जिम्मा लिएका हुन्छन्। यसकारण तिनी कुनै दोष नभएका मानिस हुनुपर्दछ। तिनी आफूखुसी गर्ने, छिट्टै रिसाउने, मात्तिने, मारपिट गर्ने र माग्‍ने लोभी हुनुहुँदैन। तिनी पाहुनाहरूको सत्‍कार गर्ने र असल काम, राम्रा कुरा मन पराउने अनि होश राखेर काम गर्ने, न्‍यायी, पवित्र र आफैंलाई वशमा राख्‍ने हुनुपर्दछ।
सरकार र सरकारी मानिसहरूका अधीनमा रहनुपर्छ भनी त्‍यहाँका मानिसहरूलाई सम्‍झाऊ। तिनीहरूले हरेक किसिमले भलो गर्न तयार रहून्।
उहाँ सृष्‍टि हुनुभन्दा अघि परमेश्‍वरसँगै हुनुहुन्‍थ्‍यो।
दिनको उज्‍यालोमा सुहाउने गरी इमानदार भएर काम गरौं। रातको झैँ मोज-मज्‍जा गर्ने, मात्तिने, व्यविचारी गर्ने, जथाभाबी गर्ने, झगडा वा डाहा गर्ने कामहरू छोडिदिऊँ।
यसैले म भन्‍दछु, पवित्र आत्‍माले भनेअनुसार हिंड र आफ्‍नो शारीरिक स्‍वभावको इच्‍छा पूरा गर्नेछैनौ
 सबैले आफ्‍नो सरकारलाई मान्‍नुपर्दछ किनभने परमेश्‍वरको इच्‍छाबिना कुनै सरकार टिक्‍न सक्‍दैन। सबै सरकारलाई परमेश्‍वरले नै खटाउनुभएको हो। कसैले सरकारको विरोध गर्छ भने उसले परमेश्‍वरको आज्ञालाई नै विरोध गर्छ। यसो गर्नेहरूले सजाय पाउनेछन्
१ कोरिन्थी ६:९-१०
 अन्‍याय गर्नेले स्‍वर्गको राज्‍यमा पस्‍ने हक पाउँदैन भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? आफैंलाई धोखा नदेओ। छाडा काम गर्ने, मूर्ति पुज्‍ने, व्‍यभिचार गर्ने, पुरुषगामी, चोर्ने, लोभ गर्ने, मात्‍ने, निन्‍दा गर्ने र लुट्‍नेहरूले स्‍वर्गको राज्‍यमा पस्‍ने हक पाउँदैन।
१ पत्रुस ५:१०
अलिबेर दु:ख उठाएपछि सबै अनुग्रहले पूर्ण परमेश्‍वरले ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरूलाई अनन्‍त महिमा बाँड्‍न बोलाउनुहुन्‍छ र उहाँले नै तिमीहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्‍छ र शक्ति दिएर दरिलो बनाई पक्‍का जगमा राख्‍नुहुनेछ।
परमेश्‍वरले तिमीहरूमा सुरु गर्नुभएको राम्रो काम येशू ख्रीष्‍टको राज्‍य नआएसम्‍म परमेश्‍वरले नै सम्‍हाल्‍नुहुनेछ। यसमा मेरो पूरा विश्‍वास छ।
धर्मीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्छन् र उहाँले सुन्‍नुहुन्‍छ, उहाँले तिनीहरूलाई सारा कष्‍टदेखि बचाउनुहुन्‍छ।
हाम्रो लागि त हाम्रै वरिपरि साक्षीहरूको भीड छ। त्‍यसकारण हाम्रो बाटोमा आइपर्ने बाधाहरू र हामीलाई अल्‍झाइराख्‍ने पापहरूलाई हामी पन्‍साऔं अनि हाम्रो सामने भएको दौड दृढतासाथ दौडौं।